११७ वर्षदेखि निरन्तर बलिरहेछ एउटै बल्ब ! – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, फागुन ०१, २०७४११:०१0
तर, पछि बुझ्दा बल्ब नबिग्रिएको देखियो । जबकि त्यतिवेला बिजुली वितरण गरिएको ७६ वर्ष पुरानो लाइनमा खराबी आएको थियो । लाइन मर्मत गरेपछि बल्ब पुनः सञ्चालनमा आयो । बल्ब गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा पनि सामेल छ । नया पत्रिकाबाट
‘चि मुसी चि’मा सुनिल क्षेत्री र कमली वाइवाकाे रोमान्स
सामूहिक बलात्कार भएकी पिडित महिलाले डिजाइजीलाई भनिन्, ‘सब थोक बर्बाद भइसक्यो अब के गर्न आउनुभयो सर ?’
यी महिलाले किन गरिन् आफ्नै मृत्युको तयारी ? विस्तृत जानकारीको लागि पुरा पढ्नु होला